Trump oo ku hanjabay inuu canshuuro dheeraad ah ku soo rogi doono Macronka ‘doqonka ah’ - BBC News Somali
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku eedeeyay inuu "doqonnimo" ku kacay markii uu canshuur ku soo rogay dhanka internetka, waxa uuna soo hadalqaaday suuragalnimada inuu canshuur aargoosi ah ku soo rogo khamriga mareykanka.
Mas'uuliyiinta Faransiiska ayaa ku doodaya in shirkaddu ay lacag yar ay bixiso amaba maba bixiyaan canshuuraha shirkadaha ay bixiyaan ee dalalka aanay wax saldhig ah ku lahayn.
Madaxweyne Emmanuel Macron oo markii ugu horreysay booqasho ku jooga Britain
"Faransiiska waxa uu haatan canshuuro ku soo rogay shirkadahayaga waa weyn ee tiknolojiyadda ee Ameerika. Haddii uu qof canshuur ku soo rogaayo, dalkooda hooyo umbaa ku soo rogi kara, waa Mareykanka ee," Mr Trump ayaa Twitterka sidaas ku soo qoray.
"Waxaannu dhawaan ku dhawaaqi doonnaa tallaabo wax ku ool ah oo aannu uga jawaabayno doqonnimada Macron. Waxaan marwalba iraahdaa khamriga Mareykanka ayaa ka wanaagsan midka Faransiiska!"
Mar goor dambe arrintaasi wax laga waydiiyay ayuu Mr Trump waxa uu sheegay: "Weligey waxaan jeclaa khamriga Ameerika oo waa uu ka wanaagsan yahay khamriga Faransiiska. Walow aanan khamrigu cabin haddana waxaan jeclahay qaabka ay u yaalaan."
Wasiirka Maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire ayaa Jimcihii jawaab bixiyay oo waxa uu sheegay in Faransiisku uu ku dhegannaan doono qorshihiisa canshuurta ee internetka. "Canshuurta la duldhigo howlaha internet-ka waa mid caalami ah oo ah caqabad aynu wadawajahayno," ayuu yiri.
Galinkii hore ee Jimcihii ayuu Madaxweyne Donald Trump waxa uu ka digay in shirkadda tiknolojiyadda ee weyn ee Apple ee Mareykanka in aanan canshuur dhaaf loo sameyn doonin waxyaabaha ay ku sameyso Shiinaha. "Halkan gudaha Mareykanka ku samee, wax canshuur ah lagu saari maayo!" ayuu soo qoray Trump.